Mpempe akwụkwọ metal coil reel NC lelver feeder line with decoiler straightener feeder 3 na 1 Coil straightener feeder machine maka akuko maka igwe ihe
Nkọwa:Ndị na-enye nri Servo Straightener,Pịa onye na-enye ya nri,Kọmpat Cost Systems, Ihe njide eriri na eriri, Pịa feedi,
Home > Ngwaahịa > Nri Cost Straightener > NC Servo Straightener na-enye nri
Ngwaahịa nke NC Servo Straightener na-enye nri , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ndị na-enye nri Servo Straightener , Pịa onye na-enye ya nri suppliers / factory, wholesale high-quality products of Kọmpat Cost Systems R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Ngwunye Ngwakọta Gbasara Ngwakọta Maka Mkpakọ Akụkụ Ngwaọrụ  Kpọtụrụ ugbu a
Kọlụpụta nri kọlụk Servo Feedight Straightener Uncoiler  Kpọtụrụ ugbu a
Uncoiler straightener feeder Coil Ijikwa akụrụngwa  Kpọtụrụ ugbu a
Cost straightener feeder Metal stamping akara  Kpọtụrụ ugbu a
Igwe eji igwe nri eriri igwe kwụ ọtọ  Kpọtụrụ ugbu a
Nri udiri nri NC leveler feeder maka akpa stam  Kpọtụrụ ugbu a
NC servo na-enye ihe eji eji uncoiler na kwụ ọtọ  Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-enye nri NC Servo Straightener maka breeki na - edobe ya  Kpọtụrụ ugbu a
Decoiler onye na-enye nri na-eji ihe ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwunye Ngwakọta Gbasara Ngwakọta Maka Mkpakọ Akụkụ Ngwaọrụ
AKW COKWỌ AKW COKWỌ AKW COKWỌ AKW COKWỌ AKWILKWỌ AKW FORKWỌ Ngwakọta nri na kọmpụta maka eriri Akụrụngwa Autpịkọta ọnụ na- ejikọta onye na-eri nri / onye na-akwụ ọtọ na ihe eji achọ mma. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na...
Kọlụpụta nri kọlụk Servo Feedight Straightener Uncoiler
NKWADO AKW SERKWỌ EDB SERR SER INWETA SERVO FEEDER STRAIGHTENER UNCOILER Usoro nri nri kọlụm Servo Straightener Uncoiler na - ejikọta onye na - azụ ya / onye na - akwụ ọtọ na ihe eji achọ mma. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na...
Uncoiler straightener feeder Coil Ijikwa akụrụngwa
UNCOILER STRAIGHTENER FEEDER COIL HANDLING EGO Ngwa eji etinye ihe na - enye ngwa nri na - ekekọta onye na - enye ya nri na ngwa nri . A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na -ebelata oghere mbara ala n'ụzọ dị mkpa ma e jiri ya...
Cost straightener feeder Metal stamping akara
ILlọ ihe ọkụkụ na-akpachasị anya gara aga, akpọnwụ ụgbọala Onye na-eke nri cost straighterer Metal stamping ahịrị na - ejikọ ndị na - enye ya nri / na-agbatị ya na igwe eji achọ mma. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na -ebelata...
Igwe eji igwe nri eriri igwe kwụ ọtọ
DPA KA IWU AHILR SER ILB STRR STR AR STR EGO Vol Igwe na-ahụ maka igwe na - enye igwe nri kọlụm na - ejikọ ọnụ onye na - enye nri / kwụ ọtọ na - eji ihe eji achọ mma. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na -ebelata oghere mbara ala...
Nri udiri nri NC leveler feeder maka akpa stam
AKILKỌ AKW LINKWỌ AKWKWỌ AKW LINKWỌ AKW LEKWỌ NRỌ NC LECELER FEEDER AUTO STAMPING Onye na-enye nri cost NC leveler na - ejikọ onye na - enye ya nri / kwụ ọtọ na - eji ihe ndozi elebara anya. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na...
NC servo na-enye ihe eji eji uncoiler na kwụ ọtọ
NC SERVO FEEDER WITH UNCOILER NA STRAIGHTENER Onye na - enye NC servo feed na uncoiler na straightener na - ejikọta onye na - eri nri / onye na - agbakwunye ya na igwe eji achọ mma. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na -ebelata...
Onye na-enye nri NC Servo Straightener maka breeki na - edobe ya
NC SERVO STRAIGHTENER FEEDER MAKA BIRI P BRR ST PADS STAMPING NC Servo Straightener onye na-enye nri na- ejikọta onye na-eri nri / onye na-agbatịnụ ya na onye na-achọ mma. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na -ebelata oghere mbara...
Decoiler onye na-enye nri na-eji ihe ọkụ
DECO ILER STRA IGHTENER FEEDER MACHINE KWES FORR MAT ENBARA EGO Decoiler Straightener Feeder 3 Na 1 igwe sara mbara ịchekwa igwe na-ejikọ onye na-eri nri / onye na-akwụ ọtọ na ihe eji achọ mma. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na...
China NC Servo Straightener na-enye nri Ngwa
NC Servo Straightener Feeders dịgasị iche iche nwere ọtụtụ ụdị ọrụ dị elu nke ụdị inye nri anyị nke dabara adaba maka ụdị akuko nile.
The NC Servo Straightener Feeders Components:
Ihe eji achọ mma --- Emebere ihe eji achọ mma maka coils nwere dayameta dị elu ruo 1200mm. A na-esi n’elu igwe wepụta eriri igwe nri n’elu tebụl nri. Loading bụ ejiri aka na crane ma ọ bụ ihe mkpuchi. A na-agbatị onye na-achọ ihe mma ma ọ bụ Hydraulic. A na-egbochi eriri ọkpọchi site na ihe mkpuchi ikuku.
Straightener --- straightkwụ rollers dị ala na-ahụ maka ụgbọ njem na-aga n'ihu na ọnọdụ na-aga n'ihu ma na-emekwa ka eriri na - enwughachi ọzọ. Ihe ndị ọzọ na ntinye na rollers rollers na-akwado nhazi nke coils dị iche iche. A na-enweta nsonaazụ kachasị mma site na ntuzizi onwe onye nke ịgbatị rollers. Ahịrị na -eme ka ọnya na-akụ ibe ya na -eme ka ọfụfụ.
Nri mpịakọta --- Nri mpịakọta, nke na-aga n'ihu na ihe coil dị n'akụkụ echere, a na-etinye ya na pịa site na nkwado aka. Nke a na - eme ka mmeghari mgbanwe kwekọọ na ịdị elu nke akwụkwọ akụkọ. Ndị na-akwagharị ya site na servo direct drive unit na ala ala. Ma nri rollers bụ chromeplated siri ike na ngwa ngwa ikuku nke elu ala na-actuated pneumatically.
Ngwa eji ejikwa igwe Mayflay dị mma maka ndị na-ebugharị ụgbọ ala 1 na nke abụọ yana ndị na-eweta ihe nrịba igwe na-eje ahịa dị iche iche dịka ikuku, ngwa, mmiri, mmiri igwe na ihe ndị ọzọ.
Ndị na-enye nri Servo Straightener Pịa onye na-enye ya nri Kọmpat Cost Systems Ihe njide eriri na eriri Pịa feedi Ndị na-enye nri Servo Coil Straightener Ndị na-enye Servo na Straightener